I-24 Best Hand Tattoos I-Ideal Design For Men and Women-Tattoos Art Ideas
I-24 Best Tattoos Hand Design Idea Kwabesilisa Nabasetyhini
sonitattoo Agasti 24, 2016
Ukususela kwizibhiyozo ukuya kwindoda eqhelekileyo kwisitrato, ukucwangciswa kwesandla esicacileyo kunye nokungaxilwanga kuye kwaba yindawo engamashumi amathathu apho unokubhala khona. Isandla siyaziwa ukuba sisona sichaphazelekayo xa sifika kumathambo.
Xa unalo luhlobo oluthile lwe-#hand tattoo engqondweni yakho, ungavumeli ukuba iindleko zalo zikumise ukuba ungenayo inki. Iindleko ze tattoo njengalokhu zinokudambisa abaninzi abantu ukuba bangene kuyo ukuba kuvela kwizakhono. Indlela efanelekileyo yokufumana isandla esihle somdlalo we tattoo xa uthabatha ixesha lakho lokukhangela oko ufuna.
2. I-Skull ne-Scorpion Hand Tattoo
Ukuthengwa akusekho kwizinto eziphathekayo. Ungathengela uhlobo lwesandla #tattoo ofuna ukuba nayo. I-business tattoo ngesandla ayizange iqale namhlanje.
3. Ukutshatyalaliswa kwesandla seTattoos
Le mihla, sibona amakhulu emifanekiso yabaculi benza i tattoo ngesandla ngendlela ongenakukunceda kodwa uyazibuza indlela abadala ngayo le fomu yobugcisa.
4. Amat Tatto
Abanye abavakalisi abanamava kakhulu banokubaluleka kakhulu ukuqesha xa kuqhathaniswa nomculi onobuchule obuncinane okanye abukho. Kukho abaculi abahloniphekileyo abahlawulisa ngeeyure kwaye oku kungabiza kakhulu ukuba ulungele ukuchitha imali.
5. I-Kkull & Flower Yenza Tattoo
Kufuneka uqonde ukuba nangona iindleko eziphezulu, ukuba umculi ochaphazelekayo ubandakanyeka, ukufumana tattoo yesandla esiyimpumelelo ngumphumo wokugqibela.
6. Umnqamlezo wezandla zeTattoos
Ukuba ucinga ukufumana tattoo yesandla esinjalo, kuthetha ukuba kufuneka usebenzise umculi onguchwepheshe oza kukunceda. Akukho nto ichaza indlela enhle ngayo i tattoo yakho yesandla xa unomculi ochanekileyo kunye nebala eligqibeleleyo leenkinga yakho.
7. Iintyatyambo Zenza Iziphatho
Iindleko zokufumana tattoo ngesandla zixhomekeke kubhajethi yakho. Enye ye mibuzo abantu abayifunayo ngaphambi kokufumana itekisi yesandla njengaleyo ukwazi ixabiso le tattoo ngesandla. Kulula ukuthola tattoo ngesandla xa uqonda izinto ezibalulekileyo malunga nalo.
8. Iintyatyambo Zenza Iziphatho
Kukho amathandathu eminwe yezandla ezenziwe ngezandla kwi-intanethi. Unokwenza ngokukhawuleza ukuba wenze i tattoo yakho ngesandla ukuze uyingqayizivele kwaye ingavamile.
9. I-Tattoo Hand Fear
Ufanele ube nobuso ekujonganeni nabathengi bakho phambi kokuba uwamkele oko uxelelwa ngumculi. Ukudibanisa umculi wakho kuqala ngaphambi kokuya tattoo ngesandla kubaluleke kakhulu. Inkqubo iya kukunceda uhlale kude neengxaki kwaye wenze ukhetho olufanelekileyo.
10. Cat tattoo ngesandla
11. I-tattoo ngesandla
13. I-Tattoo Design Super
Uninzi lwabantu abangafuni ukulahlekelwa ngamathambo, sebenzisa olu hlobo loyilo. Unokuba ubungqina bokuthi itekotini yesandla ayinaso isongelo. Unokwenza yonke into yokuyila kuyo kwaye usabonisa izinga lokunethezeka kuyo. umthombo wesithombe
14. Iimpawu ezizenzekelayo
Awunqwenela ukuba ne tattoo encinci kunomdla ngoku ukuba kukho ukwanda ngokukhawuleza kwishishini le-tattoo inking. Ucinga ukuba uya kuba nomfanekiso obalaphi emzimbeni wakho? umthombo wesithombe
15. Iintyatyambo zandla
Kukho iindawo ezininzi apho ungenayo inkenkwe kodwa ukutyunjwa kwe tattoo kwindawo enye apho abaninzi bethu banokufuna ukuba neyethu. umthombo wesithombe
16. Iimpawu zokumnyama ezimnyama
Akukho mbono ongeke uyifumane esandleni. umthombo wesithombe
Iziklomelo zezandla zobugcisa
17. Iimpawu zokubambisa izandla
Akukho nto ipheliyo into onokuyenza ngayo nale tattoo design. Ungayishiya inkulu okanye encinci kuye kuxhomekeke kuhlobo lwe tattoo olufunayo. umthombo wesithombe
18. Iimpawu ezilula zesandla
Xa kuziwa ekubeni ne-tattoo yesandla esilula, unokwenza oko kwenzeke. umthombo wesithombe
19. I-Beetle yezandla ze tattoos
I tattoo eyenzelwe ukujonga ngale ndlela yenza kube lula kuwe ukuba ungeze imilo kwaye uyiqulunqe nayo. Kukho nakuphela ukuphela kwento ongayenza ngayo ngokudalwa kwamathambo. umthombo wesithombe
20. I tattoo ngesandla
Amantombazana angakwazi ukuya kwindlela ende ekuqinisekiseni ukuba bajonga i-sexy kunye nesetyhini kunye noyilo abaya kulufuna ezandleni zabo. umthombo wesithombe
21. I tattoo yesandla esinamandla
Yonke into oyifunayo kukuba ukhangele umculi oyingcali oza kulandela amaphupha akho xa edonsa olo lwakhiwo olugqibeleleyo kuwe. umthombo wesithombe
22. I-Flower ngesandla
Ekugqibeleni, ucinga ntoni ngesakhiwo somfanekiso we tattoo njengale? Indlela ebukeka ngayo yenza kube lula kwaye ikhupha. Abafazi abanakuyeka ukuthanda lo mdwebo we tattoo ngenxa yendlela ebonakala ngayo. Unokuxelela ukuba itekisi ifumaneka kakuhle xa uzama ukubonakala uhlukile kwabanye abathwali be tattoo umthombo wesithombe
23. I-Beautiful Flower i-tattoo
24. I tattoo yesandla
Cofa apha ukuze uthole ezinye iiDat Tattoos Design
Tattoos zeJometritattoozomculo tattoostattoos ezinyawosibinitattoos zelangatattoos zohlangatatna tattootattoo engapheliyotatto flower flowerIintyatyambo zeTattooukutshiza amathamboIintliziyo zeTattoostattoosbathanda i tattoosiifatyambo zeentyatyambongombonotattoo yedayimaniIndlovu yeendlovuutywala tattootattooi tattoozinyonitattotattoostattoo yamehlotattoos zenyangaizithunywa zezuluiimpawu zezodiac zempawui-cherry ityatyambozengalo zengalotattoostattoosizigulaneizifuba zesifubaicompass tattoodesign mehndingesandlatatto tattoosiifoto eziphakamileyoiipattoosowona mhlobo womhloboiifotto zentamoiidotiihoi fish tattooi-tattoostattoos kubantutattoos kumantombazanacute tattoosI-Ankle Tattoos